Degmada Shiniile Oo Tababar Loogu Qabtay Umiliso-dhaqameedyo - Cakaara News
Degmada Shiniile Oo Tababar Loogu Qabtay Umiliso-dhaqameedyo
Shiniile(cakaaranews)Arbaco 27ka July 2016.Tababar kusaabsan sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta umuliso-dhaqameedyada islamarkaana ay ka sooqaybgaleen degmooyinka ayshica. shiniile. Hadhagaale iyo danbal ayaa si habsami leh uga furmay xafiiska caafimaadka degmada shiniile.
Hadaba Madaxa Xafiiska Caafimaadka Degmada Shiniile mudane Fadxi Shugri Axmed oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in Tababarkani yahay mid kor loogu qaadayo garaadka aqooneed ee umiliso-dhaqameedyada iyo sidii loo casriyaynlahaa umiliso dhaqameedyada islamrkaana loo dabargoyn lahaa in hooyadu meel aan xarun ama goob caafimaad ahayn kudhasho. Waxuuna intaa kudaray in tababarkan ay kasooqaybgaleen 40 umiliso-dhaqameed oo kakala yimid degmooyinka kala ah Shiniile, Ayshica.. Hadhagaale iyo Danbal.
Wuxuuna hadalkiisii ku gabagabeeyay in tababarkani wax wayn katari doono si loo helo adeeg dhalmo nadiif ah iyo daryeelka ilmaha dhasha kaas oo lagu dhimayo dhimashada hooyada iyo dhalaanka iyo sidii xarumaha caafimadka loogu soo xidhilahaa hooyada uurkaleh dibna ayna udhicin in hooyadu ku dhasho meel aan xarun ama goob caafimaad ahayn.